Vakuru vechiKristu—Vafudzi Vane Hanya Vanoita Basa Rekudzidzisa
GEORGIA | 1991 kusvika 1997
Joni Shalamberidze naTamazi Biblaia kutanga kwemakore ekuma1990
Kutanga kwemakore ekuma1990, ungano dzakawanda muGeorgia dzaingova nemukuru kana kuti mushumiri anoshumira mumwe chete. Ungano dzaiwanzoumbwa nemapoka akawanda uye boka rimwe nerimwe raiungana rega, sezvo vaparidzi vakanga vakapararira mundima yakakura iyo yaibatanidza mataundi kana kuti misha yakati kuti.
Joni Shalamberidze naPavle Abdushelishvili, avo vaishumira munzvimbo dzaiva kwadzo dzega, vakakumbirwa kuti vaende kunobatsira kuTelavi, guta riri munharaunda yeKakheti. Ungano yeko yaiva nevaparidzi 300, asi isina kana mukuru. Yaiumbwa nemapoka 13 ayo aiungana munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Pasina nguva, Joni naPavle vakabva vaona chaiita kuti hama dzisafambira mberi pakunamata. Joni anoti: “Hama dzakawanda dzaiva neminda yakakura uye dzairimawo mazambiringa. Sezvo vanhu vekumaruwa vachiwanzoita nhimbe dzekubatsirana pakuita mabasa emuminda, hama dzedu dzaipedza nguva yakawanda dziine vanhu vasingatendi.”​—1 VaK. 15:33.
Joni naPavle vakakurudzira hama idzi kuti kana dzichida kubatsirwa pakuita mabasa emuminda, dzikumbire kubatsirwa nezvimwe Zvapupu. Kubatsirwa nezvimwe Zvapupu kwaizoita kuti vawadzane nevanhu vanoita zvakanaka uku basa richitofamba. (Mup. 4:9, 10) Joni anoti, “Hama dzemuungano dzakawedzera kubatana.” Pakazobva Joni naPavle munharaunda yeKakheti papera makore matatu, makanga mava nevakuru 5 nevashumiri vanoshumira 12.
Misangano Inovandudza Unyanzvi Hwekuparidza
Zvapupu zvairambidzwa kuita zvimwe zvinhu kutozosvikira pakutanga kwemakore ekuma1990, saka vaiungana mumapoka maduku kuti vangoita Chidzidzo Chebhuku Cheungano neChidzidzo cheNharireyomurindi. Kunyange zvazvo misangano iyi yaikurudzira, yainge isina kugadzirirwa kudzidzisa vaparidzi kuita ushumiri.
Izvi zvakachinja pakaparara utongi hwechiCommunist. Sangano raJehovha rakabva raudza ungano kuti dzitange kuita Chikoro chaMwari Choushumiri uye Musangano Webasa pamisangano yadzaiita vhiki nevhiki.
Naili Khutsishvili nasisi vake Lali Alekperova, vachiri kuyeuka kunakidzwa kwavaiitwa nekupinda misangano iyoyo. Lali anoti: “Tainakidzwa chaizvo. Munhu wese aifara kuti hanzvadzi dzakanga dzavawo nezvekuita papurogiramu.”
Naili anoyeuka kuti, “Pane mumwe muenzaniso, saimba aiverenga pepanhau ari pachikuva paakanzwa dhoo richigogodzwa. Paakati pindai, hanzvadzi mbiri dzakapinda nepadhoo raipinda nevanhu maiitirwa misangano ndokunanga kuchikuva!” Lali anowedzera kuti, “Kunyange zvazvo dzimwe nguva zvaiitwa pamisangano iyoyo zvakanga zvisina kujairika, zvakatibatsira kuvandudza unyanzvi hwedu pakuparidza.”
Painge Pava Kudiwa Mabhuku Akawanda
Kwemakore, dzimwe hama dzaibudisa mabhuku anotsanangura Bhaibheri dziri pamba, dzichiita zvekuakopa nemuchina wekushandisa nemaoko. Sezvo painge pava kudiwa mabhuku akawanda, hama dzakatanga kuprindisa magazini edu kumakambani aikwanisa kutiprindira nemutengo wakaderera.
Hama dzaicheka mavara kubva mumapepanhau dzoanamira pakavha yemagazini yeChirungu kuti dzigadzire makopi emagazini aizoshandiswa pakuprinda magazini echiGeorgian
Hama dzedu dzaishandisa zvinhu zvishoma zvadzaiva nazvo kuti dzigadzire kopi yadzaizotumira kune vanoprinda. Mashoko akashandurwa echiGeorgian ainyatsotaipwa zvakanaka zvichienderana nemanyorerwo aainge akaitwa mumagazini yeChirungu. Vaibva vazocheka mifananidzo kubva mumagazini yeChirungu voinamira pamapepa ainge ataipwa. Pakupedzisira, vaizocheka mavara ainge akanyorwa zvinoyevedza kubva mumapepanhau, voanamira pakavha yemagazini yeChirungu yaizoiswa pakopi yemagazini yechiGeorgian. Kana zvadai, kopi yacho yainge yangomirira kuprindwa.
Magazini echiGeorgian ayo akatanga tanga kuprindirwa munyika yacho
Vanhu pavainge vava kukwanisa kuwana makombiyuta, dzimwe hama mbiri dzechidiki, Levani Kopaliani naLeri Mirzashvili, dzakaita makosi ekudzidzira kunyatsoashandisa. Leri anoti: “Taiva neruzivo rushoma, saka dzimwe nguva zvinhu zvaisafamba zvakanaka. Asi tichibatsirwa naJehovha, pasina nguva tainge tava kukwanisa kutaipa magazini edu uye kubatanidza mashoko nemifananidzo zvaiva mumagazini acho.”
Pasinei nekuti zvaimbooma, ungano dzemuGeorgia dzakatanga kuwana magazini aiva neruvara runoyevedza ayo aiprindirwa imomo. Asi nekufamba kwenguva vakanga vasisakwanise kuprinda mabhuku aienderana nenhamba yainge yava kudiwa. Panguva chaiyo yakakodzera vashumiri vaJehovha vemuGeorgia vakabva vawana rubatsiro kubva kusangano raJehovha.
Kuchinja Kwakaita Zvinhu
Gungano renyika dzakawanda ra1992 iro rakaitirwa muSt. Petersburg, kuRussia, rakaita kuti hama dzemuGeorgia dzionane nevamiririri vebazi rekuGermany. “Vakatsanangura kuti basa rekushandura rinowanzoitwa sei,” anodaro Genadi Gudadze. “Vakatiudza kuti nekufamba kwenguva pane vaizouya kuzotiratidza kuti basa rekushandura rinoitwa sei.”
Kuprinda mabhuku anotsanangura Bhaibheri muchiGeorgian kwakanga kusiri nyore. Sezvo mutauro wacho uchinyorwa zvakasiyana nemimwe mitauro, Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) yainge isati yava nemanyorero echiGeorgian panguva iyoyo. Saka vaitofanira kutsvaga kuti chiGeorgian chacho chingabuda sei mumabhuku edu kana aprindwa.
Pakupera kwemakore ekuma1970, imwe mhuri yechiGeorgian yekwaDatikashvili yakanga yatamira kuUnited States, uye mumwe mwana wemumhuri iyi anonzi Marina, akazodzidza chokwadi vari ikoko. Akabatsira chaizvo hama dzekuBheteri rekuBrooklyn padzakatanga kunyora mavara echiGeorgian adzaida kuzoisa muMEPS. Pasina nguva, maturakiti nebhurocha rine musoro unoti, “Tarirai! Ndiri Kuita Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva” zvakaprindwa muGermany.
Kubatsirwa Pakuronga Basa Rekushandura
Muna 1993, Michael Fleckenstein nemudzimai wake, Silvia, vakasvika muTbilisi vachibva kubazi rekuGermany kuti varonge kuti pave nehofisi yeshanduro. Michael anoti: “Ndainge ndichiri kuyeuka musangano watakaita muSt. Petersburg. “Patakasvika muTbilisi papera mwedzi 18, takashamiswa patakaratidzwa timu yainge ichitoita basa rekushandura!”
Leri Mirzashvili, Paata Morbedadze, naLevani Kopaliani vachishanda pahofisi yeshanduro muTbilisi muna 1993
Mumwedzi mishoma, boka revashanduri 11, rakanga rava kushandira muhofisi yaiva pane chimwe chivako chidiki. Kudzidziswa kwakaitwa vanhu nesangano raJehovha, kwakaita kuti ungano dzigare dzichiendeserwa mabhuku nguva nenguva.
Kuendesa Mabhuku Zvinhu Pazvainge Zvisina Kugadzikana
Pakaparara Soviet Union, kusagadzikana kwezvinhu uye kurwisana kwemarudzi kwakabva kwatanga munyika dzakawanda dzaimbotongwa neSoviet Union, kusanganisira nyika yeGeorgia. Izvi zvakabva zvaita kuti kufamba uchibva kune imwe nzvimbo uchienda kune imwe kuve nengozi, kunyanya uchiyambuka kuenda kune imwe nyika.
Hama Zaza Jikurashvili naAleko Gvritishvili (vaine madzimai avo) vaitakura mabhuku mumakore ainge akaoma zvinhu munyika yacho
Mumwe musi, muna November 1994, Aleko Gvritishvili aiyambuka achienda kune imwe nyika nedzimwe hama mbiri padzakamiswa nechikwata chevanhu vakanga vakapata zvombo, ndokuudzwa kuti vabude mumota yavo. Aleko anoti, “Vakatsamwa pavakaona mabhuku edu anotsanangura Bhaibheri. Vakabva vatimisa mumutsetse sezvinonzi vakanga vachida kutiuraya. Takanyengetera nemwoyo wese kuna Jehovha. Papera anenge maawa maviri, mumwe wavo akabva atiudza kuti, ‘Torai mabhuku enyu mubve pano​—mukangodzoka chete tinochipisa chimota ichi, tokuurayai.’”
Pasinei nekutyisidzirwa ikoko, hama dzakaramba dzichingoendesa zvekudya zvekunamata. Hama Zaza Jikurashvili, avo vaizvipira pakuita basa rekupinza mabhuku edu muGeorgia, vakati: “Taiziva kuti hama dzedu dzaida zvekudya zvekunamata. Uye madzimai edu aititsigira chaizvo pakuita basa iri.”
Aleko anoti, “Pahama dzaibatsira pakutakura mabhuku, vakawanda vavo vaiva nemhuri.” Chii chaiita kuti hama idzodzo dzirambe dzichiita basa iri pasinei nekuti raiva nengozi? Aleko anowedzera kuti: “Kutenda zvataiitirwa naJehovha uye kumuda ndiko kwainyanya kuita kuti tidaro. Taidawo kutevedzera zvinoitwa naJehovha pakuratidza hanya kwaanoita kuhama nehanzvadzi dzedu.”
Kuzvipira kwehama idzodzo kwakaita kuti mabhuku arambe achipinda muGeorgia mumakore iwayo ainge akaoma. Asi hama dzakazowana nzira dzainge dzisina ngozi dzekubva kuGermany kuenda kuGeorgia.
Kukurudzirwa Panguva Yakakodzera
Zvematongerwo enyika pazvakagadzikana muna 1995, Zvapupu zvakabva zvaronga kuti zviite gungano reruwa kekutanga. Muna 1996, vanhu vanenge 6 000 vaibva kwakasiyana-siyana muGeorgia vakapindira gungano racho munzvimbo nhatu: kuGori, kuMarneuli, nekuTsnori.
Zvapupu zviri pagungano rakaitwa pedyo neguta reGori muna 1996
Gungano rakaitirwa kuGori ndiro rinonyanya kuyeukwa nevanhu vakaripinda. Uku kwaiva kuchinja kukuru chaizvo kana zvichienzaniswa nepanguva iyo hama dzaisava nechokwadi chekuti vanhu vaizozadza here imba yakanga yahayiwa kuti vapindire Chirangaridzo! Iye zvino vakanga vava kutarisira kuti kwaizouya vanhu vanodarika 2 000, asi vaishayiwa nzvimbo yekuitira gungano yavaizonyatsokwana. Vakazosarudza kuitira gungano racho panze, mune rimwe gomo rinoyevedza riri muguta racho.
Hama Kako Lomidze, avo vaiva muDare Regungano, vanoti: “Pashure pepurogiramu, hama nehanzvadzi dzaitandara uye dzaiimba dziri pamwe chete. Zvakabva zvava pachena kuvanhu vese kuti rudo rwakasimba ndirwo runoita kuti vanhu vaMwari vabatane.”—Joh. 13:35.
Urongwa Hunoratidza Rudo Hwakaita Kuti Basa Riwedzere
Kutanga muna 1996, pakaitwa urongwa hwekuti vatariri vematunhu vashanyire ungano imwe neimwe yaiva munyika yacho kwevhiki rese. Kuti izvi zvibudirire, pakagadzwa vamwe vatariri vematunhu kuti vabatane nevaya vainge vagara vari munyika yacho.
Zviri pachena kuti, ‘basa iroro rerudo’ nekushanda kwaiita vatariri ivavo vematunhu vakatendeka kwakabatsira ungano kuti dzikure uye kuti dzinyatsotevedzera mirayiridzo yesangano. (1 VaT. 1:3) Kubva muna 1990 kusvika 1997, vaparidzi vakawedzera zvinoshamisa. Muna 1990 paiva nevaparidzi 904 vakashuma basa ravo, asi pashure pemakore 7 chete, vaparidzi 11 082 vakanga vava kuzivisa mashoko akanaka!
Kufambira mberi pane zvekunamata uko kwakanga kwatanga makumi emakore ainge adarika, kwakanga kwava kunyatsooneka uye kwapararira munyika yacho yese. Asi Jehovha aiva nemakomborero akawanda aainge akachengetera vanhu vake vemuGeorgia.
Vakuru Vanobatsira Sei Ungano dzeZvapupu zvaJehovha?
Vatariri Vematunhu Vanobatsira Sei Ungano dzeZvapupu zvaJehovha?